ए पुरुष ! तिम्रो नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण यौनिकताको मात्रै हो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ए पुरुष ! तिम्रो नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण यौनिकताको मात्रै हो ?
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०७३, शनिबार
धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठानको ड्युटिमा तैनाथ रहेकी महिला सुरक्षा गार्ड सबिता सुवाल माथी गत शनिवार मध्य राती यौन हिंसा भएको घिन लाग्दो घटना घटेको समाचार संचार माध्यममा आए । चर्चित कलाकार सन्तोस पन्त लगायत के.टि.एस सेक्युरिटी प्रा.लीका अध्यक्ष रामेश्वर शाह , प्रहरी निरीक्षक बिष्णु कोइराला , हेडगार्ड राजेन्द्र तामाङ गरि पाँच जनाको समूह मध्य राती प्रतिष्ठानको महिला होस्टेलमा पुगेर जबरजस्ती भित्र जान खोज्दा सुरक्षामा रहेकी सबिताले जान मिल्दैन भन्दा उनले गाली गलोजको सामना गर्नु परेको समाचार आयो । मदिराले लठठ भएका पन्त र समुहले सबिताका संबेदनसिल अङगमा हात लगाएको मोटाइछौ त भन्दै अनेक सवाल जवाफ गर्दै मादक पदार्थ सेवन गरेर आएका रामेश्वर साह र सन्तोस पन्तले उनी माथी यौन दुव्र्यवहार गरे ।
इज्जत सन्तोस पन्त र रामेश्वर शाहहरु जस्ताको मात्रै हो र ? गरिबहरुको इज्जत हुदैन आत्म सम्मान हुदैन ? राज्यका गहना भनिएका कलाकार जस्ले समाज परिबर्तनका लागि अहम भुमिका खेलेका हुन्छन उनिहरुले राज्यलाइ उत्पादन दिनु पर्ने होइन र ?के सधै अन्याय र दमन सहनु गरिब निमुखाले मात्रै पर्छ ? धनी र ठुलाठालुले दमन गरि रहने अनि गरिब र निमुखाले सहि रहने कहिले सम्म ? सार्बजनिक यातायातमा , कार्यालयमा , बिद्याको मन्दिरमा , अस्पतालमा , एक्लैदोक्लै बाटोमा हिड्दा जहा त्यही महिला हिंसा भएको हुन्छ । महिला एक हिंसाका रुप अनेक l बलात्कार गर्नु वा पिट्नु मात्रै महिला हिंसा होइन । बाटोमा हिड्दै गर्दा जानिजानी ठोक्किन आउनु , यात्रा गर्दा होस वा सङगै उभिनु पर्ने अवस्था आउदा अन्जान बनेर छोइनु , हात माथी हात राख्नु , कुइनो तेर्स्याएर छातिमा छुन खोज्नु , वाओ ! हाउ सेक्सी गिभ मि अ किस बेबि ” जस्ता अनेकन बोली र ब्यबहारबाट महिला हिंसा हुने गरेको छ टोलटोलमा अनि घरघरमा । गाउका कुनाकाप्च्चा देखि शहरका गल्ली अनि गल्छेडा सम्म ।जब सम्म बलात्कारीलाइ मृत्यु दन्डको सजाय तोकिदैन तब सम्म नारीहरु सिकार भै रहन्छन । जब सम्म महिला हिंसाको मुद्धालाइ गहन रुपमा लिइदैन तब सम्म हरेक चोक र चोकमा मोड मोडमा हिंसा भैरहन्छ ।
म ´ पात्रको अनुरोध ; सिलिकन सुन्दरीहरु आजकाल बजारमा जताततै उपलब्ध छन । ति मुटु नभएका संबेदना नभएका सुन्दरीहरुलाइ जता निचोरे पनि हुन्छ जता चिथोरे पनि हुन्छ । न दुख्छ तिनिहरुलाइ न तिनिहरुको आत्मा रुन्छ ।
कहिले दाइजोको कारणले प्रताडित छन नारी त कहिले जिउदै कुटेर अंगभङग बनाइन्छन । गाइ भैसिको जस्तो मोलतोल गरिन्छ अझै पनि तराइका धेरै ठाउहरुमा । छोरी पनि दिनु नगद जिन्सी पनि दिनु अनि त्यही छोरीलाई नोकरको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । अपबादका रुपमा होलन बुहारिलाइ छोरी समान देख्ने केही परिवार । ” मारे पाप पाले पुन्य ” भनेर बिस्वास गरेर जिम्मा लगाउछन आमाबाबुले उनिहरुको मुटुको टुक्रा तर जस्को हातमा सुम्पियो उसैको हातद्वारा कुटिन्छिन नारी हेपिन्छिन l जिउदै जलाइन्छिन । जीवनसाथी भनिने श्रीमान् साथी होइन शासक बन्न पुग्छ । हिंसा आखिर हिंसा हो त्यसको रुप सानोठूलो जे भए पनि । सामान्य देखि उच्च बर्गका, अशिक्षित देखि शिक्षित कहलिएका पुरुषहरुबाट एस्ता हिंसा हुने गरेका छन । बिज्ञानले सांसारिक रुप फेरेको छ l चेतनाको स्तर उकास्ने अनेक प्रयोग गरेको छ तर ती सबै प्रयोगका नतिजाहरु केवल किताबमा सिमित रहे । कोहि कसैद्वारा मनन भए पनि महिला प्रतिको पुरातन सोचलाइ परिबर्तन गर्न चाहेनन वा सकेनन l यो त्यही पुरातन साघुरो सोचा भएका पुरुषको मनोबिज्ञानले बुझ्ला । यौन जन्य हिंसा रोक्न कडा कानुन र स्वयम् हिंसात्मक पुरुस मनोबिज्ञानको महिला प्रति सकारात्मक दृस्ठिकोण र सोचको आबस्यकता पर्छ । हाम्रो देशमा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्नुमा बेरोजगार शिक्षा स्वास्थ स्व बिबेक र चेतना स्तरको कमि हुनु हो जस्को प्रत्यक्ष दोषी स्वयम् हाम्रो देशका पहरेदारहरु हुन ।
नेपाली समाज महिला र पुरुष
महिला प्रेमी र महिलालाइ केवल यौनिक दृस्ठिकोणले हेर्ने पुरुषलाई सम्पुर्ण महिला ` म ´ पात्रको अनुरोध ; सिलिकन सुन्दरीहरु आजकाल बजारमा जताततै उपलब्ध छन । ति मुटु नभएका संबेदना नभएका सुन्दरीहरुलाइ जता निचोरे पनि हुन्छ जता चिथोरे पनि हुन्छ । न दुख्छ तिनिहरुलाइ न तिनिहरुको आत्मा रुन्छ । ए पुरुष ! कृपया ! क्षणिक सुखका लागि कसैको जिन्दगीसङग नखेल । क्षणिक सुख मात्र क्षणिक हो भोगिन जेल सुख हुने भोग्न सकिए पछि तिमीले कसैको जिन्दगी बर्बाद बनाएर प्राप्त गरेको क्षणिक सुखको अन्त्य हुन्छ । क्षणिक सुखका लागि अन्धो बनेर कसैको जिन्दगीलाइ बलात्कार गर्छौ । तर त्याहा केवल शरिरको बलात्कार भएको हुदैन आत्मसम्मान आत्म सन्तुष्टि र पिडित महिलाको मनोबिज्ञानको पनि बलात्कार भएको हुन्छ शरीर सङसङै मन पनि क्षत बिक्षत भएको हुन्छ । नारी शरीर रोबर्ट होइन जसरी जुन दिशानिर्देशबाट पनि चल्ने ! नारी शरीर तिम्रो प्रयोगशाला पनि होइन !यहा मलाइ नारीबादी भएको आरोप लाग्न पनि सक्छ । तर यो सत्यतालाइ नकार्न पनि सक्दिन म , नारी पुरुष बराबर हुन भन्ने खोक्रो बेसुरको राग अलापे पनि ब्यबहारमा बराबर गरिएको छैन । हाम्रो समाज अनि सस्कारले बराबर हुन कहिलै पनि दिदैन । आफू स्वयम् नारी भएर नारिको हकहित अधिकार र उत्थानका बारेमा लेख्नु बोल्नु मेरो पहिलो कर्तब्य हो ।
ए नारी मन ! मनले मात्र नभएर अब मस्तिस्कले पनि सोच्ने बेला आएको छ है । हामी आज समयमै सचेत भए हाम्रा भाबी पिढिले आउदा दिनहरुमा पछुताउनु पर्ने छैन । यस्तै केही धुमिल छवि र चरित्र भएका पुरुषहरुको कारण शभ्य र भलाद्मी पुरुषलाई समेत बदनाम गरि दिएको छ l
आफ्ना लागि नारी आफैले उठ्नु जुट्नु पर्छ । सबै नारी एकीकृत भए सबै पुरुषले साथ दिन कर लाग्छ । कुनै कुनै अवस्थामा नारी नै नारीको शत्रु भएको नदेखिएको पनि होइन । ए नारी मन ! मनले मात्र नभएर अब मस्तिस्कले पनि सोच्ने बेला आएको छ है । हामी आज समयमै सचेत भए हाम्रा भाबी पिढिले आउदा दिनहरुमा पछुताउनु पर्ने छैन । यस्तै केही धुमिल छवि र चरित्र भएका पुरुषहरुको कारण सभ्य र भलाद्मी पुरुषलाई समेत बदनाम गरि दिएको छ । मैले यो सबै लेखी रहदा नकारात्मक अर्थ लाग्ला । सम्पुर्ण पुरुष जातिलाइ नराम्रो भन्न खोजेको कदापी होइन मैले । के पुरुषले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण यौनिकताको मात्रै हो ? किन कुनै पनि पुरुष महिलासङग यौनिक रुपमा मात्रै जोडिन चाहान्छ ? पुरुष नामको कुनै पनि सम्बन्ध र साइनोसङग डराउनु पर्छ हामीले कहिले सम्म ? दाजुले बहिनी बलात्कार गर्छ , बाबुले छोरि , हजुरबुबाले नातिनी , ससुराले बुहारी , देवरले भाउजू अनि कहिले काहीँ श्रीमानले श्रीमती बलात्कार गरेका घटनाहरु पनि बाहिर नआएका होइनन । शारीरिक सम्पर्कको बैबाहिक लाइसेन्स छ भन्दैमा श्रीमानले जति बेला चाहन्छ श्रीमतीले त्यही बेला तयार हुनु पर्छ भन्ने छैन । दुबैको सहमती हुदा त्यहा माया अवस्य हुन्छ । श्रीमतीको इच्छा बिपरित जबरजस्ती गर्छ श्रीमान् भने त्यो जबर्जस्ति करणी मुद्दा हो । बलात्कारको मुद्धा हो । घर भित्र पनि हिंसा घर बाहिर पनि हिंसा जताततै महिला हिंसा । लाग्छ , महिलाको शरीर यौनको खानी हो । तिर्खा मेटाउने पानी हो ।
गल्ती गर्छ पुरुष कल्किंत नारी
भर्खरै एक जाना आफन्त बहिनिले सुनाएकि थिइन ” दिदि , अब जाडो आउन लाग्यो छ बजेको कलेज भ्याउन साढे पाच मै हिड्नु पर्छ माइक्रो स्ट्यान्ड सम्म जान भित्री बाटोबाट निस्कनु पर्छ ट्यापेहरु हुन्छन एकदम डर लाग्छ गत साल पनि एउटा गुन्डाले ओठमा आफ्नो गनाउने मुख दल्यो छाती समायो अस्लिल बोल्यो , म कराउन खोजे बाटोमा अरु चिनेजानेका पनि हुन सक्ने सम्भावनाले कराउन सकिन भोलि मलाइ नै औला उठाउने डर जो हुन्थियो यो जाडो त नआइदिए पनि हुन्थियो । “सिधै गल्ती गर्छ पुरुष अनि दोष जति नारीको थाप्लोमा । कलङ्कित चरित्रहिन बन्छे नारी बिना कसुर बिना कुनै गल्ती ।उनको मनोबिज्ञान जाडो आउने भन्ने बितिकै पहिला भएको घटना पुन हुन सक्ने सम्भावनाले त्रसित छ । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । पाइलै पिच्छे त्रसित बन्दै हिड्नु पर्छ महिलाले यहा । बिदेश तिर कुनै पुरुषले महिलालाइ जिस्काउदैनन । बाटोमा मध्य राती एक्लै हिड्दा पनि महिलाले यौनजन्य हिंसा वा बलात्कारको सिकार हुनु पर्दैन ।भनिन्छ , हामी काहा केहिहरुले स्कर्ट लगाएर हिड्दा हाफ पाइन्ट लगाएर हिद्डा सेक्स अपिल गरेको भन्ने बुझाइ छ जस्ले बलात्कारका घटना निम्त्याएको छ ।
कृपया ! तिम्रो अस्तित्व प्रदानकर्ताको रक्षा र सम्मान गर्न सिक ! नारी शब्दलाई केवल यौनिकताको नजरले हेर्ने नजरिया र बुझ्ने तिम्रो मस्तिसक सफा गरिदेउ ।
एउटा पुरुषले छोटो हाफ पाइन्ट गर्मी भएर लगाउछ उ सभ्य नै देखिन्छ । तर महिलाले त्यही हाफ पाइन्ट लगाउदा सेक्स अपिल गरेको बुझिन्छ । छाडा भएको अनि असभ्य द्खिन्छ एउटै मौसम पुरुषलाइ गर्मी लाग्छ भने महिलालाइ गर्मी लाग्दैन ? कि महिलाको शरीर शरीर होइनन ? यो अरु केही नभएर पुरातन सोचको अबिकसित चेतना स्तर हो । बिदेश तिर छोटा कपडा लगाएर नै हिड्छन सधै न त्यहा कसैले जिब्रो पड्काउछन न सेक्स अपिल गरेको नै ठान्छ्न । यहा धेरैले नेपाली सस्कार सभ्य छ पश्चिमी सस्कार छाडा छ भन्नू हुन्छ । मैले देखेको बुझेको नेपाली सभ्यता भन्दा धेरै राम्रो र सभ्य छ पश्चिमी सभ्यता । कम्सेकम त्यहा नारीलाइ इज्जत गर्छन । नारी पुरुष बिच भेदभाब त गर्दैनन ।
फरक प्रसङग : शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक सुबिधा सामाजिक सन्जालमा बिदेशीएका नेपालीहरुको सुखद पाटो मात्रै देखेका कारण दिन प्रतिदिन नेपाल भुमी छोड्न चाहने हरुको संख्या बढेको छ भने बिदेशिएका नेपालिहरु पनि नेपाल फर्कन सक्ने बाताबरण छैन ।खै कहा छ ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता ? खै कहा छ सुरक्षा नेपालमा ? कि बलात्कारको डर कि हत्या हिंसाको डर । डरै डरको दैनिकी कतिन्जेल सम्म ? यस्तै बिबिध कारणले नेपालका बस्तिहरु खाली हुन पुगेका छन । अझ कतिपय गाउमा त बृद्धबृद्धाको लास उठाउनलाई काधको अभाब भएको समाचार पनि आउने गरेका छन ।
पुरुष र महिला दुई बिपरित लिङग आकर्षित हुनु स्वाभाबिक हो । ” नारी बिना सृष्टि सम्भब छैन भनिन्छ । ” म भन्छु , ” पुरुष बिना पनि सृष्टि सम्भब छैन । सृष्टिको निरन्तरतालाई महिला पुरुषको डिम्ब र शुक्रकिटको मिलन हुनु आबस्यक छ जस्को सह अस्तित्वको लागि दुबैको खाचो पर्छ । अहिले पहिला जस्तो जमाना र बिचार छैन । पुरुष मनोबिज्ञान र सोच समयसङ्गै परिस्कृत पनि भएको छ । तर नारिलाइ खेलौना र बेकारको जन्मक्रम ठान्ने पुरुषलाइ सम्पुर्ण नारीहरुको अनुरोध ; कृपया ! तिम्रो अस्तित्व प्रदानकर्ताको रक्षा र सम्मान गर्न सिक ! नारी शब्दलाई केवल यौनिकताको नजरले हेर्ने नजरिया र बुझ्ने तिम्रो मस्तिसक सफा गरिदेउ । महिला हिंसाका अनेक रुपहरुको अन्त्य बिस्तारै हुन्छ । महिला हिंसाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? प्रस्न सोधेर नबसौ अब अरुबाट होइन जवाफ आफैबाट खोजौ आफ्नो लागी आफै नारि पहिले उठौ l घरघरका हरेक पुरुष शासक मात्र नभएर असल साथी हुन सके महिला हिंसा संवत् घट्ने थियो !
पल्र्सट जर्नलबाट अनुदित
” चिट्ठी तिमीलाई निशा”
मात्र भन्छु मुटु भरिको मायाँ र हरपलको सम्झना ...कलमका साधा पाना भर्न खोज्छ अनि तिमीलाई […]